Qabanqaabada Shir Arrimaha Somalia Ah iyo Qorshaha Lala Damacsanyahay Somaliland | Somaliland.Org
August 27, 2010	Professor Axmed Ismail Samatar oo ku tilmaamay dadka reer Somalia ” Dadka ugu caqliga xun adduunka “
Aqoon yahanada dejiyey qorshaha shirkan waxaa ka mida Professor Axmed iyo Cabdi Ismaciil Samatar , Professor Afyare Abdi Elmi oo wax ka dhiga Qatar University, Prof Maxamed Cabdi Gaandi Wasiirkii hore ee difaaca ee Soomaaliya , Siyaasiyiin iyo aqoon yahano kaloo badan oo ka soo jeeda Somaliya kuna nool qurbaha. Waxay qorshahoodaa u ban dhigeen , Maraykanka , Ingiriiska, Europe , UN-ta iyo dawladaha Carbeed. Qodobka ugu muhiimsan ee ay ku andicoonayeen nimankaa aqoon yahannadu wuxuu ahaa in dawladda Somalia ay fashilantay , sida kaliya ee Somalia dawlad loogu dhisi karaana ay tahay in Dawladda Somalia guud ahaanba gacanta loo geliyo Somaliland , Somaliland-na Caalamku dib u soo dhiso , Caasimadda Somaliyana laga dhigo Hargeisa. Hase ahaatee qorshahaasi wuxuu noqday mid u cuntami Waayey dhammaan dawladaha reer Galbeedka , hase yeeshee waxaa qorshahaa qaatay Qaar ka mida dawladaha Carbeed oo ay ka mid yihiin Sudan , Masar , Qatar , Kuwait iyo Saudi Arabia oo ka soo horjeeda gooni isku taaga Somaliland. Taas ayaana keentay inay bixiyaan lacagta ku baxaysa shirkaa la filayo inuu ka dhaco Djibouti oo ahayd halkii markii hore lagu soo dhisay dawladda Sheekh Shariif iyo kuwii ka horeeyeyba
Professor Axmed Ismail Samatar oo muddo saddex sano ka hor ku tilmaamay dad reer Somalia ” dadka Ibn-Aadenka ugu caqli xun ” ayaa maanta ah ninka Arimaha Somalia gacanta ku haya oo ay ku kaliftay ka soo horjeedka Somaliland uu ka soo horjeedo. Shir ka dhacay Magaalada London 3 sano ka hor ,oo uu soo qabanqaabiyey SOAS ” School of Oriental and African Studies , London University oo lagu qabtay Khalili Theatre , oo lagaga hadlayey waxyeeladii Ciidamada Ethiopian-ku u geysteen Somalia markii Ethiopian-ku ay soo galeen Magaalada Mugadisho , Wariyihii hore ee Wakaaladda Reuters-na uu ku soo bandhigay sawiro naxdin leh oo uu qaaday markii Ethiopian-ku sida xun u duqaynayeen Magaalada Mugadisho , Professor Axmed Ismail-na lagu casuumay inuu khudbad shirkaa ka jeediyo, ayuu Professor Axmed si xun ugu aflagaadeeyey , dadka reer Somalia , Jendayi Frazer xoghayihii hore ee Arimaha Africa u qaabilsanayd Maraykanka iyo Somaliland-ba. waxaanu yidhi ” Maan aqoon dadka reer Somalia barigii hore waxaanse bartay intii danbe ee aan shirarka la yeelanayey , waxaan ka geyn waayey inay yihiin dadka adduunka ugu caqli xun . Kadib gabadh Somaliyeed oo halkaa fadhiday ayaa weydiisay Suaal ahayd ” waayo ” ?
Waxaanu ugu jawaabay , Suaal ayey ku weydiinayaan , adoon tii uga jawaabin ayey mid kale ku weydiinayaan , waxaa dhici karta iyada oo aanad midnaba uga jawaabin inay mid saddexaad ku weydiiyaan , markaa markaan u fiirsaday waxaan is idhi maskaxdoodu sida saxda ah ee dadka adduunku u fakaro uma shaqaynayso oo ah tan ku keentay dhibaatada maanta haysata.
Professor Axmed wuxuu aflagaadeeyey oo kale Jendayi Frazer ” Waxaanu yidhi ” haddaan shahaadad aqoonta ah siin lahaa Jendayi Frazer waxaan siin lahaa darajada C waayo waan aqaanaa oo maaha qof aqoon wanaagsan leh shakhsiyan. Kadib wuxuu wax ka sheegay Somaliland waxaanu yidhi ” Maaha in dadka lagu qasbo inay ka go’aan Somalia ee waa in la weydiiyaa ” . Shirkaas oo ay ka soo qayb galeen aqoon yahano badan oo reer Europe-ba , Wariyaal iyo Siyaasiyiin badan , waxaa si weyn looga biyo diiday sida aan ixtiraamka lahayn ee Professor Axmed faalada uga bixiyey dadkaa , Cedric Barnes oo ka socday Wasaaradda Arimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa wuxuu Professor Axmed ugu jawaabay, haddaad reer Somalia tihiin maaha inaad Somaliland wax ka sheegtaane waa inaad kaga dayataan wanaaga Somaliland ku dhaqanto.
Waxaa hubaala in aanay lacag dawlado Carbeed bixiyaan ama Qorshe dhowr Professor soo samaystaan aanay waxba ka qaban karin dhibaatada Somalia illaa xalku ka yimaad Somaalida dhexdeeda. haddase Somalia waxay noqotay ” reer ba’ow ayaa kule ” in nin aan u dhalan iyo dawlado shisheeye Somalia ay ka dhigtaan Carwo kolba dal shisheeye shir loogu qabto si qofkaasi ama dalkaasi ugu fushado dan gaara.
Waxaa wax laga xumaado ah in Caalamku wali is diidsiinayo xal u helidda wixii dhaliyey dhibaatada Somalia oo ahayd dagaalkii Somalilanders-ka iyo dawladdii Somalia oo ah xididka uu ka soo unkamay xanuumka Somaalia hayaa maanta. Nabad iyo degenaanshana kama dhalan karaan Geeska Africa inta Caalamku iska indha tirayo qadiyadda Somaliland , Somaliyana waxay ahaan doonta Carwo kolba qofkii ama dawladdi Magacdoonaysaa adduunka u soo baddhigo dhibaatada dadka Somaliyeed haysata sida xukuumadda Djibouti ama dawladaha IGAD.
Waxaa hubaala in aanay dawladaha Carbeed waxba yeeli karin Somaliland, lahayna awood siyaasadeed oo ay ku xaliyaan dhibaatooyinka ka holcaya dalalka Carbeed dhexdooda iyo guud ahaanba Caalamka Islaamka oo aan ahayn lacag yar oo ay ku laaluushaan koox yar oo dan gaara wadata , taasina ay keento inay sii huriso dhibaatooyinka ka dhex jira dhammaan dawladaha Islaamka. Yemen , Saudi Arabiya , Libya , Masar iyo dhammaan dawladaha Carbeed waxaa maanta ku dhexnool boqollaal kun oo Qaxooti Somaliya oo dumar iyo Carruur u badan, gaajana ugu dhex dhimanaya Wadanadaa. Waxaanu Caalamku ka dheregsan yahay kufsiga ,dilka, Mastaafuriska iyo dhaca ay Carabtu ku hayaan dadkaa Somaaliyeed ee ku dhibaataysan dalalkaa Carbeed.
Professor Axmed Ismail Samatar waxaa u suurta gashay inuu afhayeen u noqdo Somalia oo aanu u dhalan , haddaba waxaa isweydiin leh ; maye Professors , Aqoonyahannadii, Siyaasiyiintii, Saraakiishii iyo wax garadkii u dhashay Somalia?. Waxaa iman doonta maalin ay dadka reer Somalia fahmaan ujeedada uu Axmed Ismail Samatar uga duday dalkiisii hooyo iyo halkuu ka dhashay oo aanay fahansanayn maanta , haddase wuxuu ka qab qaadanayaa Somalia oo noqotay ” Nin buka boqol u talisay “.
Sannadka waxaa loo diyaar garoobayaa Maabka cusub ee Geeska Africa , wiigan waxaa adduunka loo soo bandhigay balaankii ” Rhino City ” Caasimadda Jamhuuriyadda cusub ” Republic of Southern Sudan oo la filayo in ay dhalato Jan 2011 , Eritrea way xorawday , Bishan waxaa kale oo la soo afjaray dagaalkii 30 sano usoo dhaxeeyey Jabhada Somali-galbeed iyo Ethiopia , Somaliland iyo Somaliyana waxaa hubaala in aanay fogayn inay sidoodii ku soo noqdaan , laba dal oo walaalo ah oo jaara sidii boqollaalka sanoba ay soo ayahd.
Previous PostMadaxweynaha Somaliland Oo Magacabay Madaxda 25 Hayadod, Todoba Agaasime Iyo Taliyasha CiidamaNext PostSomalia has a role model for success on its doorstep	Blog